အီလက်ထရောနစ် အင်ဂျင်နီယာဌာန – Technological University (Toungoo)
ပြည်တွင်းသာမက အရှေ့တောင်အာရှအဆင့်မီ၍ နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြုခံရသည့် ဌာနတစ်ခုအဖြစ် ရပ်တည်နိုင်စေရန်။
အီလက်ထရောနစ် အင်ဂျင်နီယာနှင့် ဆက်စပ်သော နယ်ပယ်များတွင် ပြည်တွင်းသာမက ပြည်ပရှိ တက္ကသိုလ်များ၊ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်း၍ သုတေသနလုပ်ငန်းများ အဆင့်မီအောင် မြှင့်တင်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရန် ။
တိုင်းပြည်အတွက် အမှန်တကယ် လိုအပ်သော အာဆီယံဒေသတွင်း နိုင်ငံများနှင့် တန်းတူ အရည်အချင်းသတ်မှတ်နိုင်သော အီလက်ထရောနစ် အင်ဂျင်နီယာများ မွေးထုတ်နိုင်သည့် ဌာနတစ်ခု ဖြစ်လာစေရန် ။
နိုင်ငံတော်ဖွံဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်အီလက်ထရောနစ်အင်ဂျင်နီယာနယ်ပယ်မှ ထူးချွန်ထက်မြက် သော လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များ မွေးထုတ်ပေးနိုင်သည့် အဆင့်မြင့်သင်ကြားမှုနှင့် သုတေသနများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ရန်။
အီလက်ထရောနစ် အင်ဂျင်နီယာဘာသာရပ်ကို အခြေခံ၍ လူနေမှုဘ၀ကို မြှင့်တင်ပေးရန် ။
အရည်အသွေးရည်မှန်းချက် (Quality Objectives)
၁။ အီလက်ထရောနစ်အင်ဂျင်နီယာ ဘွဲ့ကြိုသင်တန်းများတွင် သင်ကြားနေသော ဆရာ/ဆရာမများ၏ သင်ကြားမှု အရည်အသွေးအပေါ် ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများ၏ စိတ်ကျေနပ်မှု (၈၅%)အထိ ရရှိအောင် ဆောင်ရွက်ရန်။
၂။ ဘွဲ့ကြိုသင်တန်းနှစ်တစ်နှစ်ချင်းစီ၏ ပထမနှစ်ဝက်စာမေးပွဲတွင် (Grade D နှင့် Grade E) ရရှိသော ကျောင်းသား/ ကျောင်းသူ ရာခိုင်နှုန်းအား (၂၀%) အောက်လျော့နည်းစေရန််။
၃။ အီလက်ထရောနစ်အင်ဂျင်နီယာ ဘွဲ့ကြိုသင်တန်းများ၏ အောင်ချက်ရာခိုင်နှုန်းအား (၈၀%)နှင့် အထက်ရရှိသည်အထိ ဆောင်ရွက်ရန်။
၄။ အီလက်ထရောနစ် အင်ဂျင်နီယာဌာန တွင်တာ၀န်ထမ်းဆောင်ကြသော ဆရာ ဆရာမ များ၏စွမ်းဆောင်ရည်များ ဖွွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရှိစေရန် အတွက် အရည်အသွေးမြှင့်သင်တန်းများ၊ ဆွေးနွေးပို့ချမှုများအား ပညာသင်နှစ် တစ်နှစ်လျှင် အနည်းဆုံး (၃) ကြိမ်နှင့် အထက် ရရှိအောင် ဆောင်ရွက်ရန်။
1. To nurture multi-skilled engineer who have the ability to understand the concept of core electronics subjects that will facilitate understanding the advancement of electronic engineering knowledge and practice
2. To promote students contributing in the design, research and implementation of products and services in the electronic engineering area work as team on multidisciplinary projects through effective communication skills and leadership qualities
3. To contribute engineer who commit moral and ethical responsibilities and to continual improvement in the practice of electronic engineering and other professional activities
•	PEO 1 - Technical Competence •	PEO2- Communication Skills/ Leadership •	PEO3- Professional Ethics/ Lifelong Learning
i.	Engineering Knowledge - An ability to apply knowledge of Mathematics and Science to solve engineering problems;
ii.	Problem Analysis - An ability to identify, formulate and solve Engineering problems;
iii.	Design/Development of Solutions – An ability to designasystem, component, or process to meet desired needs within realistic constraints such as economic, environmental, social, political, ethical, health and safety, manufacturability, and sustainability in accordance with standards;
iv.	Investigation – An ability to examine and study complex engineering problems with the use of research based knowledge and methodology;
v.	Modern Tool Usage – An ability to create and apply modern electronic engineering techniques and computer-based software tools to simulate and analyze complex engineering problems;
vi.	The Engineer and Society - An ability to access social, health, safety, cultural and consequent responsibilities related to professional engineering practice;
vii.	Environment and Sustainability - An ability to understand professional electronic engineering knowledge for solving contemporary and environmental issues required for sustainable development;
viii.	Ethics - An ability to function on multi-disciplinary teams;
ix.	Individual and Team Work - An ability to purpose effectively as an individual and asamember or leader in diverse teams in multidisciplinary projects to work co-curriculum activities;
x.	Communication - An ability to communicate effectively;
xi.	Project Management and Finance - An ability to apply engineering knowledge and management philosophy for managing projects asamember oraleader to estimate finance in multidisciplinary environments;
xii.	Life Long Learning - Recognition of the need for, and an ability to engage in life-long learning. The graduate attributes (GAs) can be viewed the following locations: •	University official website •	Department notice board, Lecture rooms and Laboratories
1 ဒေါက်တာအေးဆုမွန် Ph.D (EC) ပါမောက္ခ
2 ​ဒေါ်ခင်ကြူကြူလှိုင် ME (NT) တွဲဖက်ပါမောက္ခ
3 ​ဒေါက်တာစန်းလှိုင် Ph.D (EC) တွဲဖက်ပါမောက္ခ
4 ​ဒေါ်နှင်းအေးလှိုင် ME (EC) တွဲဖက်ပါမောက္ခ
5 ဦးအောင်မြတ်ကို BE (EC) ကထိက
6 ​ဒေါ်ရွှေရည်ထူး ME (EC) ကထိက
7 ​ဒေါ်ရည်မွန်စိုး BE (EC) ကထိက
8 ​ဒေါ်ယုယုဆွေ BE (EC) ကထိက
9 ​ဒေါ်နီလာဝင်း ME (EC) လက်ထောက်ကထိက
10 ​ဒေါ်ဝါဝါကျော် ME (EC) လက်ထောက်ကထိက
11 ဦးဇေယျာနိုင် BE (EC) ကထိက
12 ​ဒေါ်ခင်ဇာနည်ခိုင် BE (EC) လက်ထောက်ကထိက
13 ​ဒေါ်ဝတ်ရည်ဖြိုး BE (EC) လက်ထောက်ကထိက
14 ​ဒေါ်မီမီကျော်ဦး ME (EC) လက်ထောက်ကထိက
15 ​ဒေါက်တာနီနီမေဝင်း Ph.D (EC) သရုပ်ပြ
16 ​ဦးရန်အောင် BE (EC) လက်ထောက်ကထိက
17 ​ဒေါ်ခင်ဦးနိုင် BE (EC) လက်ထောက်ကထိက
18 ​ဒေါ်ခိုင်ဇင်သက် BE (EC) လက်ထောက်ကထိက
19 ဒေါ်နီနီဌေးလွင် ME (EC) လက်ထောက်ကထိက
20 ဒေါ်ဆုမြတ်တင်ဆွေ BE (EC) သရုပ်ပြ
Total views : 98110